मोदी र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ? — Sanchar Kendra
१अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण नसुन्ने एमालेको अडान
२एघार महिनामा एक करोड ३० लाखभन्दा बढीको सियो भित्रियो
३संसद बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित
४एमाले र माओवादी सांसद आन्तरिक छलफलमा
५बाजुराको बुढीगंगामा भोलि मतदान हुँदै, एक हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइए
६विनोद शाही हत्या प्रकरण- प्रमाण नपुगेको भन्दै पक्राउ परेकी मेयर अम्बिकालाई छाड्ने तयारी
७संसद बैठक रोकेर सभामुखसँग परामर्श
८अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
९कञ्चनपुरमा विद्यालयको छतमा सुतेका धामी मृत फेला
१०दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
११अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
१२अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार !
मोदी र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रूसले आक्रमण जारी राखेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गरेका छन्। सोमबार मोदीले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच रूसले युक्रेनको राजधानी कीभ, मारिउपोल, खार्किभ, सुमी शहरहरू छाड्न चाहनेहरूकालागि भन्दै युद्धविरामको घोषणा गरेको छ । रुसी फौजले ती शहरहरुमा स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे देखि युद्धविराम घोषणा गरेको हो ।
युक्रेनमा मानवीय प्रतिक्रियाका लागि अन्तरविभागीय समन्वयको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार विपत्तिजनक मानवीय अवस्था र कीभ, खार्किभ, सुमी र मारिउपोल शहरहरूमा यसको तीव्र उग्रतालाई ध्यानमा राख्दै युद्धविराम घोषणा गरिएको हो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई व्यक्तिगत रूपमै अनुरोध गरेका कारण युद्धविराम घोषणा गरिएको रुसी पक्षको भनाइ छ ।
रुसी पक्षले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसी सशस्त्र सेनालाई मानवीय उद्देश्यका लागि युद्धविराम घोषणा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । २४ फेब्रुअरीमा रुसी फौजले युक्रेनमा सैनिक कारवाही थालेयता त्यहाँ भिडन्त जारी छ ।
केही दिनअघिमात्रै दुई मुलुकले मारिउपोल शहरमा युद्धविराम गरी शहर छाड्न चाहनेहरूका लागि सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए । यद्यपि सो क्षेत्रमा रुसी आक्रमण नरोकिएको युक्रेनी दाबी छ ।